Induction Brazing HAVC Pipes nwere igwe eji eme ihe eji eme ihe
Home / ngwa / Brazing imebi / Itughari Brazing HAVC
Categories: Brazing imebi, itinye n'ọkwa brazing igwe Tags: Brazing, brazing HVAC, brazing HVAC ọkpọkọ, ọla brazing, ọla kọpa HVAC brazing, ọla kọpa ọkpọkọ brazing, HVAC, HVAC na-ekpo ọkụ brazing, Vlọ ọrụ HVAC, Itinye n'ọkwa Brazing HVAC Ọkpọkọ, induction hvac brazing, Heaterme ihe HVAC na-eme ka ọ dị ọkụ, Itinye n'ọkwa HVAC okpomọkụ
Itinye n'ọkwa Brazing HVAC Ọkpọkọ
A na-eme ka ọkpọkọ friji na-egbuke egbuke mgbe niile dị ka brazing na-eme ka nkwonkwo na-enweghị ike ịdaba na-eguzogide elu na obere okpomọkụ na nrụgide. Mgbe soldering friji ọjà ọ kasị mma iji solder nke nwere a mejupụtara nke ọlaọcha na ya dị ka ọlaọcha ókè na ọla kọpa na-eme maka ihe ndị magburu onwe ihihi free ike nkwonkwo (capillary mma).
HLQ ntinye bụ ndị ọkachamara n'ịchepụta ihe eji eme ka ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ maka brazing nke akụkụ compressor, ihe ndị na-ekpo ọkụ na ndị na-ekpo ọkụ ọkụ.
Air conditioners nwere ọtụtụ akụkụ na-brazed. Ihe ndị a na-ahụkarị bụ ọla kọpa na aluminom:
Akụkụ aluminom, dịka ọmụmaatụ evaporator na njikọ condenser (tube-to-tube, tube-to-block, tube-to-tank)
Ngwunye tub-na-adaba na unit condenser
Ngwunye tube na-adaba na unit evaporator
Ngwunye tub-na-akwa akwa na compressor
-Uf na-tubes na usoro nkesa
Brazing imebi yiri soldering ma e wezụga okpomọkụ dị n'elu 800 degreesF.
Maka ọla kọpa, ihe a na-ejikarị brazing bụ nke a na-akpọkarị sil-phos dị ka a hụrụ n'aka ekpe.
E nwere ọtụtụ ụdị nke onyinye a.
15% Phosphorus / Copper / Silver Alloy bụ otu ụdị nke na-eji 15% ọlaọcha ma ọ bụ ọkọlọtọ maka ndị ọrụ ntanetị na-arụ ọrụ nke ngwa nju oyi. . Ọ naghị arụ ọrụ dịka 5%.
Enwekwara Phosphorus / Alloy Alloy nke na-enweghị ọlaọcha nke m na-achọpụta na ọ baghị uru maka nrụzi.
Ọla kọpa Brazing maka ụlọ ọrụ HVAC
Otutu ọla kọpa na-acha ọla ọcha ọla kọpa site na MSI Automation ntinye ihe nchoputa brazingEnwepu kpo oku na teknụzụ nke ikpo ọkụ na-ekpo ọkụ nke ọma nwere ike ọla ọla ọcha ọla kọpa ọla kọpa na-ejedebe n'otu ogbugba. Usoro a na-ewepụ ọzụzụ ọkụ aka na-agwụ ike, na-eme ka agbanwe agbanwe ma belata ohere nke njikọ njikọ.
Nkwonkwo brazed n'etiti ọla kọpa tube na ọla ozu ahụ zuru ezu. Oge kpo oku site na iji MSI puru iche induction kpo oku ọ bụ 1/4 nke ot gburugburu ọla kọpa tube eriri aghụghọ.